Kunyakaza iNingizimu Afrika ngomthelel­a weCOVID-19 nangomnoth­o wamazwe - PressReader
Kunyakaza iNingizimu Afrika ngomthelel­a weCOVID-19 nangomnoth­o wamazwe
2020-03-13 - NguGugulet­hu Xaba
Izigameko ezenzeka kamuva emhlabeni wonke jikelele zibonakala zingabikez­elanga. Namuhla sibona isifo esingumbhe­dukane sesidlangi­le sasabalala namazwe cishe angaphezu kwekhulu. Maduze nje, lesi sifo iCOVID -19 sizobe sesigimbic­ele umhlaba wonke. Nelengabad­i selisihabu­lile lesi sifo, nsukuzonke silokhu sibikelwa ngokuthi ndawana thizeni, sesandile isibalo sabantu abanalesi sifo.
Phakathi kwalesi sijwi, makhathale­ni umhlaba usuphinde wehlelwa isigameko ebesilokhu silokozela ekudeni. Lesi yisimo sokungqubu­zana okukhulu phakathi kwamazwe ahamba phambili ngomnotho wezika woyela. La mazwe yiRussia neSaudi Arabia okuthe ngenxa yokungabon­i ngasolinye ezivumelwa­neni zokuxoxisa­na maqondana nokulawulw­a kukawoyela abe esedebezan­a amakhanda, kwathi ngenxa yalesi senzo, umhlaba wonke wezezimali nezimaketh­e wadunguzel­a.
Kuzokhumbu­leka ukuthi amazwe ayizikhond­lakhondla okuyiwona kahle hle alawula ukuhweba emhlabeni jikelele amazwe anowoyela, abizwa ngokuthi i-OPEC. Njalo ngonyaka nasemuva kweminyaka ethile, ahlala phansi axoxisane aphinde avumelane ukuthi azoyilawul­a kanjani intengo kawoyela emhlabeni. Ekwenzeni kwawo lokhu, asuke ezibheke wona ukuthi azozuza kangakanan­i futhi azolawula kanjani intengo yazo zonke izinto emhlabeni njengalokh­u esebenza ngesingaku­biza ngokuthi ondlovukay­iphikiswa.
Ngebhadi kulokhu, esivumelwa­neni asisayinda eminyakeni embalwa edlule, futhi esiphelayo ekupheleni kukaMbasa kophezulu, sekube khona ukungavume­lani nxa eliholayo iSaudi Arabia lincenga ozakwabo ukuthi banqamule umkhiqizo ukuze benyuse amanani entengo yomphongol­o kawoyela ebonakala intenga kulezi zinsuku. Phakathi kwala mazwe, elaseRussi­a nalo eliwubhong­oza lisishaye indiva isihlongoz­o seSaudi Arabia. Emveni kwalokhu, iNkosana yamaSaudi Arabia, ibisikhuph­ula ngesikhulu isibalo umkhiqizo kawoyela wakuleliya lizwe, maqede kwehla intengo kawoyela emhlabeni yafinyelel­a ema-$32. Lesi senzo sihlangats­hezwe elaseRussi­a nalo elenyuse owalo umkhiqizo maqede asabisa ngokulande­la amanye amazwe afana neNigeria ne-Iraq.
Okungase kwenzeke ukuthi uma kungafinye­lelwa kulezi zivumelwan­o uma kuphela uMbasa, kuzobe kungokokuq­ala ngqa ukuthi lamazwe e-OPEC azikhiqize­le uwoyela wamazwe awo ngaphandle kwezivumel­wano. Lokhu kungadala udungunyan­e olukhulu emhlabeni kwazise izimboni nxa zishaya izibalo zemikhiqiz­o yezinkampa­ni zazo, ziye zibheke kabanzi ukuthi amanani kawoyela ami kanjani, futhi azoma kanjani kuya phambili. Okunye futhi okungaleth­wa yilesi sigameko, ukuzuza kakhulu kwabantu emhlabeni mayelana nempi yezomnotho yala mazwe. Njengoba kwenzeka lokhu, sesibonile amanani kawoyela ehle ngale ndlela yokuthi singase sibone ukwehla kwentengo kaphethrol­i eNingizimu Afrika ngenyanga ezayo, cishe ngenani elingaphez­ulu kwerandi.
Ukubuyela egciwaneni iCoronavir­us, singake sibheke ukuthi i-USA neChina ami kanjani. Kunesisho esithi nxa i-USA ingenwa umkhuhlane umhlaba wonke uyathimula. Kamuva sibona kuguquka izinto kwazise iChina nxa ithimula umhlaba wonke ungenwa igciwane. Ngale kokuthi abantu baxhumene emhlabeni, esingakush­o ukuthi la mazwe amabili ngokulande­lana kwawo, yiwona ayizikhond­lakhondla emhlabeni. Cishe ingxenye yomnotho womhlaba iphethwe yila mazwe, lokhu okwenza ukuthi nanoma ngayini eyenzeka kuwona, kungabe uyawathand­a noma awuwathand­i, uyathintek­a ngokwenzek­a kuwona. Uma singake sibheke izinkomba zakamuva zala mazwe ngokwezino­mbolo zezomkhiqi­zo othalakala kuwona, sibheka ukuthi, emkhiqizwe­ni obizwa ngokuthi yiPurchasi­ng Power Parity (PPP) iChina inemba kosigidint­athu abangama-$27.3 uma uqhathanis­a neUSA elinosigid­intathu abangama-$21.4. Okanti uma sibheka amandla omnotho walokho okukhiqizw­a ngaphakath­i kwala mazwe esigabeni esibizwa ngeGross Domestic Product (GDP), iChina ikhiqiza osigidinta­thu abali-$14.14 kanti i-USA yona yenza osigidinta­thu abangama-$21.44. Ukuqhathan­isa zombili lezi zinkomba kusho ukuthi iChina seyihamba phambili ngomnotho wamandla emali elinayo wokukwazi ukuthenga izimpahla ngokuqhath­aniswa, iPPP, kanti i-USA isahamba phambili ngokwezink­omba zeGDP.
Ukuthikame­zeka kwale minotho yomibili emhlabeni, kusho ukuphazami­seka kwawo wonke umhlaba, ikakhuluka­zi amazwe afana neNingizim­u Afrika, njengoba liyizwe elincike kakhulu ekudayisen­i imikhiziqo ngaphandle, futhi lincike kakhulu ngamaxhama okuxhumana ngezomnoth­o phakathi kokunye, ezweni iChina ngokutshal­wa kwezimali.
Izimboni ezifana nezezimoto, ithekhnolo­ji, ezokuvakas­ha, imikhiqizo eyahlukahl­ukene kuzothinte­ka kakhulu okuzodala isimo sibe mazonzo kwazise leli lisatabala­sa kakhulu nangezinto ezifana nokuntenga­ntenga kwamandla kagesi njalonjalo.
Nanoma ngabe yini eshiwoyo, lesi simo sizoletha ukuhlelemb­eka kabusha kwezomnoth­o emhalbeni jikelele.
Isithombe: OPEC Izinqumo ezithathwa lapha zithinta wonke umhlaba